Hevitra mandalo ; Resaky ny mpitsimpona akotry : lainga izany hoe fanadiovana izany | NewsMada
Hevitra mandalo ; Resaky ny mpitsimpona akotry : lainga izany hoe fanadiovana izany
Fanodikodinana saim-bahoaka, kabary fampatoriana hanadinoana ny ratsy niseho na natao. Samy toy ny fandevenana tay an-tsalaka avokoa ary tsy ampy hanalana ny loto na hanafoanana ny maimbo. Very hevitra tokoa angaha ny fitondrana ka tsy mahita fanafody eo amin’ity fery mamaivay vokatry ny fanatanterahana asa mamoafady tao amin’ny fifaninanana fidirana ho mpianatra ho mpitsara ity. Fisian’ny kolikoly hatrany moa no mampitatra ny fery isak’izay mandeha. Fantatry ny rehetra fa poizina mamotika ny firenena io kolikoly io hany ka raha misy ady tokony ho voalohany eo amin’ny laharam-pahamehana dia ny ady amin’ny kolikoly. Araky ny fiheveran’ny maro dia any ambony any no miafina ny atidoha mikotrika sady mpiaro ka mahatonga ny kolikoly ho biby tsy maty vonoina. Kinga dia kinga ery ny iraka mpanao aro-afo misakana ny afon’ny fanadihadina tsy handady hatrany aminy. Ara-bakiteny fanamafisana an’izany, ny fandoroana an’ireo
« porofo mivaingana nampirimina ho fandresen-dahatra ». Fanaovana heloka mandoza izany famotehana porofo izany, sady porofo efa nogejaina any amin’ny toerana ao ambany fiadidian’ny Fitsarana. Mihodina ka mihodina ny resaka fa miverimberina tsy misy fitsaharana ny fanononana ny Fitsarana. Miainga avy any amin’ny fotony dia ny fampianarana ho mpitsara sy ny sasantsasany amin’ireo mpifaninana ho mpianatra ao amin’io sekoly io ka hatrany amin’ny fitantanana an-tampony miandraikitra ny Fitsarana. Samy mamofona avokoa izay iantefan’ny dinika. Tsy manana ambara ny Minisitra momba ny fanadihadiana izay tokony natomboka maika hanazavana ny tontolo manodidina an’ireo heloka ireo. Marina fa noho ny raharaha mikasika ny tenany manokana tohin’ny fanendrikendrehan’i Houcine Arfa azy dia efa sahirana be ihany
i Ramatoa Minisitra. Fa manampy trotraka azy koa eo amin’ny fandalinana an’ireo zava-nitranga ireo dia ny ahiahy sa ho sanatrian’izany mikitikitika biby an-davaka na mikasika voamason’angatra. Tsy aleo ve misinda kely ahafahana miaro tena tsy misy teritery? Sa dia mamy loatra ny toerana ka aleo manao fanamby amin’ny fiandrasana an’izay mety hidona eo ? Aoka ho avy izay ho avy ! Ny andro fitsarana anefa efa mandodona. Ny ampitso tsy ho ela dia tonga ary mety hifaoka tsy misy havakavaka toy ny tadio.